Portrait bezithombe abadumile ipuleti ngaphansi ezihlukahlukene amagama: Converter yokukhanya noma softreflektor, "Ubuhle Dish" noma nje "ipuleti". Zikhona izici ezimbili eziyinhloko amapuleti:
Portrait isidlo - kuyini futhi kungani?
Softreflektor ngezinye izikhathi ifakwe imishini ezengeziwe: lens kwezicubu namaseli. Enkabeni yalo ukubonakalisa okuvamile, kodwa "alethwe ingqondo". I ububanzi we ipuleti mkhulu kunezinhliziyo ukubonakalisa okuvamile, zikhona ezinye izici design ezengeziwe.
Ukuze portrait ipuleti Profoto kubonise kangcono ukukhanya maphakathi ifakwe into ehlukanisayo (deflector). Le mininingwane kuyinto imisebe ngqo kuthiwa nombala basakaza phezu lonke ipuleti. Ukukhanya ukuqondisa ikhefu. Iningi ngokunembile nangendlela ephumelelayo ukusabalalisa ukukhanya ukusiza iseli. Bawafaka portrait ipuleti kungaba, uma kukhona umphetho.
Okuvame kakhulu diameters portrait amapuleti:
- kusukela 400 mm kuya ku-410 mm - luncane;
- kusukela 550 mm kuya ku-560 mm - abhekwa medium usayizi isigaba;
- kusukela 680 mm kuya ku-700 mm - amapuleti enkulu flash.
Ububanzi 850 mm noma ngaphezulu ukuze uthole cishe kungenakwenzeka. Ochwepheshe batusa ukuba ayeke eseneminyaka ububanzi isilinganiso amapuleti. softreflektory Small ezisebenziseka studios encane isithombe, kepha isilinganiso kakhulu isidingo, uma isikhala ukudubula ivulekile. Elikhulu kufanelekile softreflektory ukwenza portrait iqembu.
Portrait ipuleti we-ikhamera flash esikhulu kakhulu - isiqinisekiso sokuthi ukukhanya uthambile. It kuqinisekiswa yokuthi leyo nto zikhanyiswa ipuleti at iphuzu ngalinye, futhi lokhu kuholela izithunzi ukuthambisa. Qhathanisa kungaba Ilanga elihlale libalele esinamafu. Uma imisebe yelanga kufanele aphule phakathi kwamafu, kancane kubonakala kuzo, bamboza zonke izinto emgwaqweni-engeli lehlukene.
Indlela ukukhetha "Ubuhle Dish"?
Uma studio incane, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ingavuli ukubeka ipuleti ibanga ngokwanele ezinkulu ukusuka kokuthathwayo. Nokho, lokhu ngeke kube yinkinga uma ufuna ukuthatha isithombe, isibonelo, isithombe, kodwa izithombe ekukhuleni umnyuziki ayisadingeki. Kulokhu, ukulingana encane ubukhulu ipuleti portrait. Nokuqubuka kukhona iwukudambisa kokufiphala nge high quality ukuqoshwa. Ngokuya izibalo eziqondile, ukuphakama ikhanda, njengoba umthetho, ngaphakathi cm 30 futhi ibanga kusukela ekhanda kuya ebeleni - hhayi ngaphezulu kuka-1000 mm. Lapho ekhetha lens 50 mm studio encane (amamitha 2-3 ngabambelela odongeni ngihamba eside, 1.5-2 amamitha ububanzi) ingasetshenziswa yini ngokuphepha portrait ipuleti 410 mm.
Softreflektor ubukhulu encane - ukukhetha ephelele studio ekhaya.
Ukuze studio Ngokwesilinganiso, okungukuthi egunjini kwamamitha 3 * 5 nokuningi, kutuswa ukuba uhlale portrait ipuleti ubukhulu Ngokwesilinganiso, ie 560 mm. Ngisho emikhulu kuyadingeka esimweni lapho studio is banzi ngempela futhi kungalindelwa ukuba imodeli uzodinga ukudubula yobude obugcwele.
Plate kuzo zonke izimo
Kakhulu ziphoqa portrait ipuleti izithombe imfashini. Lapha, njengesibonelo - intombazanyana ne nice, ahlanzekile, isikhumba uzilungise. ukusebenzisa kakhulu ngempumelelo kungashiwo yakhetha icebo ilungiselelo imishini "butterfly". Lokhu kuvumela Umdwebo ukukhanya.
Elinye iphuzu elibalulekile - umbala ipuleti portrait. Kuyadingeka ukuba banake ushona. Kunconywa ukuthatha ipuleti, okuyinto ababethi esiliva, njengoba ithuthukisa ikhono ziveza ukukhanya. Effect kanje, kungenzeka ukuthola uma sisebenzisa eliphezulu kakhulu izinga upende omhlophe, okuyikhona abakhiqizi abaningi.
Portrait Plate: lokho ukuhlanganisa?
Ukuze unciphise ukukhanya ugongolo kubonakala kusukela isidlo, ungafaka yeseli esikhethekile softreflektora. ngaleyo ndlela Ukukhetha cell ezinhle Ungashintshanisa lokhozi. Esithombeni umkhakha lanamuhla imiphumela, onikeza portrait ipuleti amaseli, sekusakazeke kakhulu.
Honeycombs kukhona ngempela eqolo, futhi elula kakhulu futhi enokwethenjelwa inketho - ukuba uwuthenge iqoqo ne ipuleti. Ngamunye, lokhu kuyophumela isamba nakakhulu, kodwa asikho isiqinisekiso sokuthi ukuhambisana abangenakukwazi ukukunikeza. Idumile professional bezithombe kits, ezinye zazo yilezi:
- Portrait ipuleti;
Omunye obaluleke ngaphezu portrait amapuleti - a diffuser emhlophe. Ngokufaka, kanjalo umthwebuli unazo esiyindilinga softbox esigcwele. Zikhalele ochwepheshe diffuser akuvamile, nokho abakhiqizi cishe njalo siyifake ikhithi ukuba plate.
Plate kanye isambulela: duo enkulu
Sebenzisa portrait plate ingafakwa bephethe izambulela. Buthanani ukuqaqa nje, lokhu kuthatha amasekhondi ambalwa, izitholele nezinto zokuya akakubangeli izinkinga, ngakho-ke lokhu isethi kuvamile ngempela phakathi bezithombe wesimanje.
Ngokukhetha ukusebenza isambulela portrait ipuleti, kufanele sikhumbule ukuthi ubukhulu kufanele okungenani elilodwa amamitha nengxenye. Inhlanganisela ikuvumela ukuba uthole izithunzi emangalisayo ezithambile - kulabo abasebenzisa ipuleti eyodwa kuphela kungenzeka zingenzeki. Kulesi isidlo inikeza geometry olunembile, ngoba ubonakalisa ukukhanya parallel, kodwa isambulela kuyakhanyisa okusabalele. Ungakhetha isambulela ngenhloso ngaphandle matte ebonisa imisebe yokukhanya. Lihambisana plate portrait ngeke sifinyelele ukukhanya soft kakhulu. Yiqiniso, kuyoba khona ukulahlekelwa okuncane yokukhanya.
Kodwa isambulela esiliva lapho esebenza portrait ipuleti yalutho. Kuthinta inikeza nse plate, ngaphandle siqinise futhi yini buthaka-ke. Kodwa ungakwazi uthathe i-umbrella ekukhanyeni. Usayizi umthombo wokukhanya isambulela zizoshintsha, kodwa lokhu kungase kushintshwe ngu plate portrait. Nokho, ngeke ukuthambisa ukukhanya, futhi nje ukubhekana ukuthi isambulela ekukhanyeni. It iqeda ukubukeka izithunzi ku maphakathi ifreyimu futhi ukulolonga isithunzi, okungase ukudala isidlo.
Softreflektor izandla ngokwenu: Ingabe kungenzeka?
Yenza softreflektor ngoba flash zangaphandle - umsebenzi akunzima kakhulu. Kufanele babe ekuchithweni kwayo:
- nezitsha ezimbili plastic (20 cm futhi 12 cm ububanzi);
- yensimbi nokunamathisela ngomthofu;
- ngentambo eqinile kakhulu;
- glue osheshayo;
Thenga cishe konke ongakwenza ngasiphi esitolo hardware, kuyazuzisa ngempela ngokoqobo amapeni. Yini okumelwe uyenze?
Indlela yokwenza "Ubuhle Dish" wena?
Portrait wenza isidlo ngezandla zabo kanje. Okokuqala, udinga ukuthatha isitsha zinkulu futhi ingaphakathi wakhe kamnandi kakhulu ukunamathisela ucwecwe usebenzisa ingcina osheshayo. Emaphethelweni kumele ziphathwe ngethephu enamathelayo, ukuze ucwecwe akuyona yokuxhashazwa. A isitsha esincane unama ukuba ngaphandle, futhi ucwecwe futhi ngokucophelela. Ngokulandelayo, wenza imbobo phansi isitsha ingaphezu - ukuze elalilapho lalingakwazi faka ikhanda flash. Lokhu kufanele baphume ithebhu ezine plastic. Badinga basindiswe. Njengomthetho, nezitsha plastic zakhiwe impahla sasivumela obukhulu, kodwa ziyaqothuka, ngakho ngeke agobe amacembe ufana nje kwasekuqaleni kufanele ukufuthelana aphindekile. Lapha futhi basisize we yensimbi nokunamathisela ngomthofu.
Uma ungakwazi ukuhambisana nayo yonke osayizi, umlomo wombhobho uzobe ezigugile uvalwe. Kulokhu, iyiphi fixings ezengeziwe akudingeki, futhi ungakwazi udlulele umsebenzi olandelayo - ukubeka isitsha ezincane ngaphakathi sabafowabo ezinkudlwana. Akukho imfihlo khona. Okokuqala, insimbi nokunamathisela ngomthofu e emaphethelweni izitsha ezimbili wayenza izimbobo ezintathu, khona-ke thatha intambo eqinile kakhulu futhi threaded ke ngokusebenzisa izimbobo okuholela. Intambo kudingeka qinisa ngokulinganayo ke ulungise isikhundla isitsha kwangaphakathi.
Uhlelo usulungile ngokuphelele, ungakwazi uqale ukuhlola.
Uma konke kwakwenziwa ngendlela efanele, uzophawula ukuthi ithunzi ngokusebenzisa umlomo wombhobho yayiya obukhulu, nokucija zabo ziye zancipha, kodwa avelele abalahlekelwe ukukhanya kwazo. Image etholwe usebenzisa amapuleti self-ezenziwe, bheka umahluko phakathi kuka ngaphandle kwalo. Emaphethelweni ithunzi etholakala ethambile, basuke bachitheka, kwabantu igcinwa maphakathi isithunzi, ukuvumela imizwa, ngokoqobo, yesithombe ukujula.
Indlela Yokukhetha Ikhamera Digital
Umdlavuza pancreatic: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Internet ukukhwabanisa. Kuphi ngokukhwabanisa Ze-Internet?
Mpunga Warbler: incazelo, ukukhahlamezeka kwendawo, imifanekiso, kanye nokuqukethwe ekhaya